Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic kwe-Cement Paste For Concrete - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukuhlanganiswa kwe-ultrasonic ye-samente unamathela inikeza izinzuzo ezinkulu ze-precast ukwakha, izitshalo ezomile nezitshalo. Lokhu kufaka phakathi: Isikhathi esincane sokuqala nesethi yokugcina, isilinganiso esincane se-superplasticizer, i-hydration esheshayo neyengeziwe futhi namandla amakhulu okucindezela.
Ubuchwepheshe bokuhlanganiswa kobukhonkolo bendabuko, njenge “ekuhambeni komgwaqo” noma ama mixers ojikelezayo ahlinzeka isenzo sokuxuba okwanele ukusabalalisa ama-agglomerate ama-particle samakhemikhali nezinye izinto zokwakha, ezifana nomlotha we-fly noma Silica. Ngenkathi izinhlayiya zangaphandle zalezi zinhlaka zivezwa emanzini, izindawo eziphakathi kwezinhlayiya zihlala zomile. Lokhu kubangela ukuthutha okuncane futhi okungaphelele.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Mixing Technology
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic ubuchwepheshe obuphambili kakhulu ukukhipha amandla nokusabalalisa ubukhulu be-micron nobukhulu be-nano-usayizi eziketshezi. Ukuxubana kwe-Ultrasonic kusebenzisa amandla okugcoba ama-cavitational asebenza kahle ekuxubeni kwezinto ezisezingeni elihle kunezingxube ze-Rotary mixers nama-rotor-stator mixers. Sensimu, Silica, fly ash, pigments noma I-CNTs, ukusebenza kwalezi zinto kukhuliswa kakhulu ultrasonic nizihlakaza, njengoba kuthuthukiswa ukusatshalaliswa kwezinhlayiyana kanye nokuxhumana namanzi.
Phakathi ne-hydration – ukusabela kwamakhementi ngamanzi – Izigaba ze-C-S-H zakha izakhiwo ezinjengezinaliti. Izithombe ezansi ngezansi zibonisa ukuthi isakhiwo se-microstructure samamenti sinamathisela ngemva kwama-5hrs we-hydration. Ku-ultrasonicated cement unamathele, izigaba ze-C-S-H ziba ngu-500nm ubude obude, kuyilapho unamathiselwe ongabonisiwe, izigaba ze-C-S-H zizungeze 100nm, kuphela.
Microstructure of Cement Namathisela Emva 5hrs Isikhathi Hydration
nge processing ultrasonic
ngaphandle kokucubungula kwe-ultrasonic
I-Portland Cement Namathisela (i-CEM I42.5R), C. Rössler (2009) – I-Bauhaus University Weimar
Ukuhlanganiswa kwe-ultrasonic cavitational kuholela ukukhula okusheshayo kwezigaba ze-C-S-H.
I-Ultrasound Pulse Velocity
Ukukhula kwama-C-S-H ama-correlates ekushiseni ekunamathiseni kwe-samente ngenkathi ye-hydration (chofoza kwesithombe esifanele). In the ultrasonically uhlanganiswe cement unamathisele, the I-hydration iqala cishe. ihora elilodwa ngaphambili. I-hydration yangaphambili ihambisana nokukhula kwangaphambili kwamandla okucindezela (chofoza isithombe esifanele). Isivinini se-hydration esandayo singalinganiswa yi-ultrasound pulse velocity, futhi.
Ikakhulukazi ngokukhonjiswa kwe-precast ne-drycast, lokhu kuholela esikhathini esincane kakhulu kuze kufike ukhonkolo okhonjiwe. Izifundo zeYunivesithi yaseBauhaus (eJalimane) wabonisa lokhu okulandelayo ukunciphisa izikhathi ezibekiwe.
5 hr 15 iminithi -29% 3 hr 45 min
Enye inzuzo eyithakazelisayo yokuxuba i-ultrasonic yithonya ku-fluidity. Njengoba kuboniswe etafuleni ngenhla, i ukunyuka kwenyuka ngo-approx. 30%. Lokhu kungavumela ukunciphisa umthamo wezinsika eziphezulu.
Ukuhlanganiswa kwenqubo ye-Ultrasonic Mixers
I-Hielscher inikeza abaxube be-ultrasonic ukuhlakazeka okuphumelelayo kwe-samente, Silica, fly ash, pigments noma I-CNTs. Okokuqala, noma yikuphi ukwaziswa okumile kumele kuhanjiswe ngamanzi ukuze kuhlanganiswe okuphezulu – okwamanje unamathele. I-mixer i-Hielscher ultrasonic, i-deaggomeroma futhi ihlakazeka izinhlayiya ezisetshenziswayo cavitational ishear. Ngenxa yalokho, yonke indawo ye-particle ngayinye ivuliwe ngokugcwele emanzini.
Ukucubungula kwe-Ultrasonic kwe-Cement Namathisela
Endabeni yokunamathiswa kwe-samente, i-hydration iqala ngemuva kokucubungula kwe-ultrasonic. Ngakho-ke, i-mixer ye-Hielscher ultrasonic kufanele isetshenziswe ngaphakathi, njengoba ukunamathiswa kwe-samente kungenakulondolozwa isikhathi eside. Umdwebo ohleliwe ngezansi ubonisa inqubo. Esikhathini esilandelayo, inqwaba, njengesihlabathi noma igravel ingeziwe futhi ixubene nokunamathiswa kwe-samente. Njengoba izinhlayiya ze-cement sezivele zihlakazekile ngalesosikhathi, ukunamathiswa kwe-samente kufana kahle ne-aggregate. Ikhonkrithi isilungele ukugcwaliswa kwezibunjwa ze-precast noma zokuhamba. I-tank break-up eduze kwe-mixer ultrasonic ingasetshenziselwa ukucubungula ngokuqhubekayo uma kwenzeka isidingo sokukhonkolo esingaguquki.
Ukuxoshwa kwe-Ultrasonic kwe-Silica, i-Fly Ash ne-Nanomaterials
Ukuhlakazeka Silica, ukushayela umlotha, ukuguqulwa kwamanye ama-pigment noma amanye ama-nanomaterials, njenge ngama-carbon nanotubes, kudinga amanye amazinga okusebenza kanye namazinga kagesi. Ngenxa yalesi sizathu sincoma umxube ohlukile we-ultrasonic ukukhiqiza uhlaka oluhlakazekile oluhlanganisiwe olwengezwa ekakheni lokukhonkolo. Sicela uchofoze ku-graphic above ngenhloso yokudweba kwesimiso sale nqubo.
Imishini yokuxuba i-ultrasonic edingekayo ukuze iphakanyiswe ingahle ilandelwe ukuhlola okulinganiselwe ngokulingana nomshayeli we-pilot Isethaphu ye-UIP1000hd (1,000 watts). Ithebula elingezansi libonisa izincomo zedivayisi jikelele ngokuya ngevolumu ye-batch noma izinga lokugeleza kwe-samente unamathisele ukucutshungulwa.
0.1 kuya ku-10L 0.2 kuya ku-2L / iminithi I-UIP1000hd, I-UIP1500hd
10 kuya ku-50L 2 kuya ku-10L / iminithi UIP4000
na 10 kuya ku-50L / iminithi UIP16000
Njengoba kufika ku-16kW yamandla wokuxuba we-ultrasonic ngedivaysi eyodwa, i-Hielscher inikeza amandla okucubungula adingekayo ekusebenzeni okuphezulu kwevolumu. Lolu buchwepheshe buyi kulula ukuhlola futhi izilinganiso eziphezulu.
I-Ultrasonic Inline Mixer (I-UIP1000hdT)
S. Perters; M. Stöckigt; C. Rössler (2009): Impembelelo yamandla-i-Ultrasound ku-Fluidity nokubeka iPortland Cement Pastes; ku-17th Conference Conference International on Materials Building 23rd - 26th September 2009, Weimar.
C. Rössler (2009): I-Einfluss von Power-Ultraschall noma iFasß- und Erstarrungsverhalten von Zementsuspensionen; ku: Tagungsband der 17. Internationalen Baustofftagung isakhiwo, Hrsg. Finger-Institut für Baustoffkunde, Bauhaus-Universität Weimar, S. 1 - 0259 - 1 – 0264.